Ogaden News Agency (ONA) – Wabiga Awasha oo Dad Laayay & TPLF oo Kufaraxsan.
Wabiga Awasha oo Dad Laayay & TPLF oo Kufaraxsan.
Posted by Dulmane	/ September 18, 2017
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Awasha ee wadanka Itoobiya ayaa sheegaya khasaare lixaad leh oo uu gaystay wabiga Awasha oo si aan horay loo arag ufatahay, sida xogta aan kuhelayno fatahaad xoogan oo uusameeyay wabiga wayn ee mara Gobolka Awasha ayaa keentay khasaare xoogan oo naf iyo maalba isugu jira.
Warka ayaa intaas kudaraya in wabigu uu soo fatahay xili aan loo diyaar garoobin taas oo keentay in uu saamayn wayn kuyeesho dadka deegaanka, waxaana lasoo tabinayaa khasaare aad ubadan oo nafeed halka khasaaraha hantiduna ay tahay mid aan laqiyaasi karin.
Taliska wayaanaha oo looga bartay in uu dadka shacabka ah ku fiirsado dhibaatooyinka ayaan wax caawimaad ah ufidinin dadka ay masiibadu ku habsatay, waxaana lasheegayaa in ay ciidanka wayaanuhu dusha kadaawanayaan dadka shacabka ah iyo hantidooda oo biyaha dulsabaynaya.
Sidoo kale taliska wayaanaha ayaan wax hadal ah kasoo saarin masiibadan ku habsatay shacabka, waxaana lasheegayaa in ciidanka gumaysigu ay xabsiga utaxaabeen siyaasiyiin deegaanka ah iyo waxgarad rabay in ay arintan kahadlaan si caalamku uu u ogaado, waxayna saraakiisha wayaanaha ee aagaas ku andacoodeen in aan wax hadal ah la ogolayn ilaa iyo inta uu maamulku war kasoosaarayo.
Dadka siyaasada gumaysiga Itoobiya dhaliila ayaa sheegaya in taliska wayaanaha uusan jirin wax qorshe ah oo udiyaarsan oo masiibooyinka lagaga hortagi karo iyo qorshe lagaga daba tagi karo toona, sidoo kale taliska wayaanaha ayaa siwayn loogu dhaliilaa in uu caalamka kaqariyo dhibka kadhaca shucuubta uu gumaysto.
Sidoo take xukuumada wayaanaha ayaa lasheegayaa in ay malaayiin doller ku bixiso soo iibsashada hub iyo saanad ciidan halka dadka ree Itoobiya ay yihiin kuwa ugu liita caalamka oo dhan oo aan helin wax ay karsadaan 3da wakhti.
Dhaqamada noocan oo kale ah ayaa lagu yaqaanaa gumaystayaasha waxayna kooxda TPLF si wayn udabakhday dhaqankii caadiga ahaa ee laga filayay oo ahaa gumaad oo qari.